Dhageyso: Ra’isul wasaaraha soomalia oo war kulul ka soo saaray weerarkii lagu qaaday maqaayada posh | kowtharmedia.com
Home WARAR Dhageyso: Ra’isul wasaaraha soomalia oo war kulul ka soo saaray weerarkii lagu qaaday maqaayada posh
Dhageyso: Ra’isul wasaaraha soomalia oo war kulul ka soo saaray weerarkii lagu qaaday maqaayada posh
Ra’isul wasaaraha xukuumadda soomalia mudane xasan cali kheyre ayaa si kulul uga hadlay qaraxii cawada ka dhacay maqaayada posh Treats oo ku dhow Isgoyska Banaadir.
Ra’isul wasaaraha ayaa cambaareeyay qaraxa waxaana uu ciidamada ammaanka amray in deg deg ay uga jawaabaan weerarkaan.
“ Halkaan anagoo fadhina ayaad maqleyseen in uu qarax dhacay hada, qof walbo oo idinka idiinka mid ah telefoonkiisa ayuu ku booday kulligeen waan damqananay, waxaa laga yaabaa qaraxaasi in dad soomaaliyeed ay wax ku noqdeen” ayuu yiri ra’isul wasaare kheyre.
Ra’isul wasaaraha ayaa shacabka ka dalbaday in ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan sugitaanka nabad galyada caasimadda.
” Waxaan aqbalnay in qarax dhaco oo aan ka cararno, in qof meel lagu dilo oo aan ka aamusno taasina macquul ma ahan, waa in aan Ciidamada amaanka la shaqeyaan” ayuu hadalkiisa raaciyay ra’isul wasaaraha.
Qarax lagu weeraray maqaayada posh ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad ku dhaw 14 ruux halka dhaawaca uu intaasi ka badanyahay.
Halkaan ka dhageyso codka ra’isul wasaaraha
Previous PostDaawo Sawirro: Ciidamada gaashaan oo soo afjaray weerarkii shabaab ay ku qaadeen pizza house Next PostDEG DEG: Qarax ismiidaamin ah iyo weerar toos ah oo lagu qaada hotel ku yaala isgooyska banaadir